Igumbi labucala elipholileyo yonke indawo eBandakanyiweyo yeDolophu
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguAla
UAla unezimvo eziyi-59 zezinye iindawo.
Igumbi labucala elikwinqanaba elisezantsi (iBasement) lendlu enkulu yeVictorian ebekwe kumbindi wedolophu yaseKensington. Ibekwe ngokufanelekileyo kufutshane neSibhedlele saseToronto saseNtshona, iDyunivesithi yaseToronto, iMarike yaseKensington, kunye nezinye izinto ezininzi ezikufutshane. Eli gumbi libandakanya indawo yokusetyenziswa kwekhitshi kunye negumbi lokuhlambela le-4 kunye nezinye iindwendwe ezi-2. Umnyango ohlukeneyo kunye nobumfihlo bunikezelwa ngokutshixa ikhowudi. Impahla iyafumaneka kwisiza.
Esi sithuba AYIKUFANELEKILEYO IINDWELE EZINGAPHEZU KWE-6Fet okanye i-1.289 yeemitha.
Le suite inefenitshala epheleleyo kwaye ifumaneka kuphela ngexesha lokubhukisha leentsuku ezingama-28. Ukuba ujonge ukuhlala ixesha elide kuya kufuneka wenze ubhukisho oluninzi ukukhusela imihla. Eli ligumbi labucala elifakwe ngokupheleleyo linekhitshi ekwabelwana ngalo kunye nebhafu kunye nezinye iindwendwe ezi-2.
IMarike yaseKensington yindawo eyahlukileyo yeenkcubeko ezahlukeneyo kwiDowntown yaseToronto, eOntario, eCanada. IMarike yindawo ehlala abantu abadala kwaye yenye yezona ndawo zaziwa kakhulu kweso sixeko. NgoNovemba ka-2006, yachongwa njengeNdawo yeMbali yeSizwe yaseCanada. Ukuhamba umgama ukuya eLittle Italy, Annex, Queen Street & Dundas West Brewery District
Umbuki zindwendwe ngu- Ala
Ndifikeleleka ngokulula kwaye ndiyafumaneka ukuhlangabezana neemfuno zeendwendwe okanye ukuphendula nayiphi na imibuzo.
Iilwimi: English, Português, Русский, Українська